Beesha Caalamka oo Walaac ka muujisay Khilaafka ka dhex taagan Madaxda Soomaaliya | SAHAN ONLINE
Beesha Caalamka oo Walaac ka muujisay Khilaafka ka dhex taagan Madaxda Soomaaliya
MUQDISHO – War-saxaafadeed ay soo saartay Beesha Caalamka ayay ku sheegeen in ay ka walaacsan yihiin xaaladda siyaasadeed ee ka dhex taagan Xildhibaanada golaha Shacabka ee Soomaaliya.
Warkan oo kasoo baxay Qaramada Midoobay,Midowga Afrika,Midowga Yurub,Urur goboleedka IGAD,Mareykanka,Talyaaniga iyo Ingiriiska ayaa loogu baaqay Madaxda sarsare ee Dowladda Soomaaliya in la xaliyo khilaafka jira.
Beesha Caalamka waxay ugu baaqday Hoggaamiyeyaasha Soomaalida iyo siyaasiyiinta in ay dhowraan sharciga iyo dastuurka Federaalka ee KMG isla markaana wadahadal lagu dhammeeyo xiisada siyaasadeed ee jirta.
Sidoo kale waxay ku boorisay golaha Baarlamaanka Soomaaliya in ay Xukuumadda wadahadlaan maalmaha soo socda kuna dhammeeyaan khilaafkooda siyaasadeed ee ka dhaxeeya qaab nabdoon oo Dastuurka waafaqsan.
……Waxyaabaha sare u qaadi kara xiisadda siyaasadeed ee taagan, isla markaana horseedi kara qalalaase in uu dhaco waa in laga fogaadaa ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay Beesha Caalamka.
Beesha Caalamka ayaa sheegtay in khilaafka soo cusboonaaday uu dhabar jab ku noqon doono guulaha laga gaaray dhinacyada siyaasadda,dhaqaalaha iyo ammaanka isla markaana dhaawacaya sumcaddii Soomaaliya.
Ugu dambeyn Beesha Caalamka ayaa bogaadisay shaqsiyaadka dhex dhexaadinaya dhinacyada is haya ee khilaafka ka dhexeeyo.